Cities ee Netherlands jecel baaskiilada ay. Utrecht wax badan ayey maalgashi ku sameysaa baaskiilkeeda kaabayaasha. jidadka baaskiilka Long iyo goobaha baabuurta la dhigto weyn mid si fudud loo isticmaali waxaa baaskiilada.
Antwerp waa magaalada ugu baaskiil-friendly Belgium ee, la horumariyo network jidadka baaskiil. Iyada oo mashaariic badan oo loogu talagalay in lagu sii wanaajinta, Sida xaqiiqada ah Antwerp ka mid ah dalal baaskiil ugu sareysa Europe sii joogi doono.
Munich leedahay qorshe cad si ay u dhisaan badan zone network baaskiilka iyo kor ugu qaaddo kaabayaasha baaskiil ah. Hadafka ugu dambeeya waa in la gaaro a 30% modal share for baaskiilada. Haddii aad rabto in aad tijaabiso helitaanka agagaarka Munich on baaskiil, aad waxaa u safri karaan tareenka ka Berlin, Vienna, iyo Zurich, ka mid ah magaalooyinka kale.
Diyaar ma u tahay inaad booqasho ku bixiso qaar ka mid ah meelaha ugu fiican Yurub iyadoo la isticmaalayo baaskiilkaaga iyo tareenkaaga oo keliya? Hel diyaar u quudhin ee Meyeydaan, iyo jartaan tikidhka tareenka aad hore!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)